Madaxweyne Biixi Oo Soo Xidhay Tartankii Ciyaaraha Goboladda | Gabiley News Online
Madaxweyne Biixi Oo Soo Xidhay Tartankii Ciyaaraha Goboladda
November 16, 2020 - Written by admin
Madaxweynaha Somaliland ayaa soo gunaanaday tartanka kubbadda cagta gobollada Somaliland oo maanta lagu soo gebogabeeyey garoonka Hargeysa Stadium.
Kaasoo ay ku guulaysteen xulkii ka socday gobolka Daad-madheedh.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan xubno kamid ah golaha wasiirrada, taliyaha ciidanka Booliska, madaxda gobollada Maroodi-jeex iyo Daad-madheedh, xildhibaanno, asxaabta xisbiyada qaar ka mida.
Siyaasiyiin iyo marti-sharaf kale, ayaa daawashada ciyaarta kaga qayb-galay garoonka kubbadda cagta ee Hargeysa Stadium oo ay ku sugnaayeen kumannaan katirsan taageerayaasha gobollada Daad-madheedh iyo Maroodi-jeex.
Kuwaas oo ay wejiyadooda ka muuqatay xamaasad taageerenimo.
Ugu horrayn wasiirrada wasaaradaha Dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo arrimaha gudaha Boos Mire Maxamed iyo Maxamed Kaahin Axmed oo halkaas ka hadlay, ayaa hambalyeeyey kooxda guulaysatay, iyaga oo xulka kaalinta labaad galayna ku bogaadiyey dedaalka ay sameeyeen, iyaga oo sidoo kalena ammaanay ciidanka Booliska iyo cid kasta oo gacan ka geysatay inuu tartankani nabadgelyo ku qabsoomo.
Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, ayaa hambalyo uu u diray kooxda guulaysatay iyo midda kaalinta labaad gashay kaddib, waxa uu si guud u bogaadiyey dhallinyarada reer Somaliland, isaga oo mid mid carrabka ugu ballaadhiyey faa’iidooyinka kala duwan ee laga dhaxlo ciyaaraha.
Waxaanu yidhi,“Waxan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarada Somaliland meel ay joogaanba, mid ciyaarayey, mid taageere ahaa iyo mid qaban-qaabiye ahaa, waxaynu baranay ciyaaruhu sida ay dadka isu dhexgeliyaan.
Waxaynu baranay sida nabadda u dhaliyaan, waxaynu baranay sida loogu firfircoonaada oo qaadka iyo balwadaha loogaga dheeraado, waxana aynu bilaabaynaa inay magaalooyinka waaweyn oo dhammi bilaabaan in sannadka oo dhan la ciyaaro oo aanay ciyaaruhu joogsan.”
Intaa ka dib, waxa uu madaxweynuhu koobkii ay ku guulaysteen guddoonsiiyey xulka kubbadda cagta ee gobolka Daad-madheedh.
Isaga oo sidoo kalena billadihii ay mutaysteen ciyaaryahannadii intii tartanku socday goolashii ugu badnaa dhaliyey, kuwii akhlaa-wanaagga iyo ciyaar-wanaagga la yimi, garsooreyaashii dedaalka dheeriga ah la yimi, tababarihii ugu wanaagsanaa tartankan.
Qaar kamid ah madaxdii ku dedaashay qabsoomidda tartankan, qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradda Warfaafinta, dawladda hoose ee Hargeysa iyo hoggaanka ciidanka Booliska, waxana halkaas kusoo dhammaaday tartankii koobka kubbadda cagta oo muddo labaatan maalmood ah soo socday.
Daawo: Sawirro Dheeraad ah: